AIZA NO ALEHA : Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina -
AccueilVaovao SamihafaAIZA NO ALEHA : Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina
AIZA NO ALEHA : Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina
02/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
« Ndao hihira », fiarahan’i Tovo J’hay sy Mirado
Mpanakanto mbola tsy tafaraka. Hiara-dia amin’ny seho iray nampisalorana ny hoe « «’Ndao hihira » i Tovo J’hay sy Mirado. Seho hotanterahina etsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady 04 febroary izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Mpanakanto samy manana ny feo mangany, ary samy manana ny fomba fihira mampiavaka azy. Ankoatra ny anjaran’ny tsirairay ka hitondra ireo hira nahafantarana azy avy, dia hanana anjara toerana betsaka amin’ity fampisehoana ity ny fihiran’i Tovo J’hay ny hiran’i Mirado sy ny mifamadika amin’izay. Hanome tsiro hafa ny fampisehoana ihany koa anefa ny fisian’ireo mpanakanto vahiny nasaina ahitana an’i Tosy sy Christian K. Efa santionany amin’ny fampiaraham-peon’izy ireo ny hira tambatra efa nivoaka tamin’ny haino aman-jery samihafa.
Hiran’ireo sary miaina ho kaloin’ny
Fiverenana amin’ny fahazazana. Io no tanjon’ny Child 1 Young Music, na ny CYM izay hikalo indray ireo hira nanamarika ireo sary miaina samihafa amin’ny seho atolotr’izy ireo etsy amin’ny CCEsca Antanimena ny sabotsy 03 febroary manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Hisongadina mandritra ny seho ireo hira nanamarika ireo horonantsary miaina nanana ny lazany, raha tsy hitanisa afa-tsy ry « Blanche-Neige et les sept nains », « La belle et la bête », « Le roi Lion », « Princesse Sofia », « Raiponce »… Manodidina ny hira 30 no hiangalian-dry Océane sy ny namany amin’io hetsika io. Fifantenana notanterahina tamin’ny volana septambara no nahazoana ny tarika CYM, izay hiangaly amin’ny fomba mendrika ireo hira malaza ireo. Ankoatra ny hira, dia hanana ny anjara toerany amin’ny fampisehoana ihany koa ny haingon-tsehatra sy ny fitafiana samihafa, izay hanaraka ny hira atao.
Mozika Rock hiarahana amin’ny tarika Kiaka
Hisantatra ny fiakarany an-tsehatra amin’ity taona ity ny tarika Kiaka, ka manome fotoana ireo mpankafy azy sy ny mpiondana rock etsy amin’ny Piment Café Behoririka, anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Fotoana hitondran-dry Nini sy ny tariny indray ireo hira nahafantarana ny tarika, na ireo milamindamina toa ny « Izy roa kely », « Mbola kely »…. Na ireo somary mavesatra raha tsy hitanisa afa-tsy ny « sabotsy alina », « Soavaly metaly », « Rovako »… Amin’ny seho takariva toa izao, mamelatra ny talentany amin’ireo sangan’asa mpanakanto hafa ihany koa ny tarika Kiaka.
Skandal Buffet – Ankorondrano
Hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Johary
Samy variana tamin’ny sehatra hafa. Tafaray, ary hivoaka amin’ny fahanginany ny tarika Johary, ary hanolotra seho tokana etsy amin’ny Skandal Buffet etsy Ankorondrano, anio alina manomboka amin’ny 8 ora. Tany amin’ny 30 taona lasa no efa nahafantarana ny fahaizan’izy efatra mirahalahy mampiara-peo, ary mbola voatazona izany hatramin’izao. Ao anatin’ny endrika kanto hatrany no hameloman-dry Mahery, Goth, Luk ary Sefo ireo hira nahafantarana ny tarika Johary toa ny « Trio » ; « Soanambo », « Omeko azy », « Ny androany », « Tiako foana », « angidina »…
Telozoro – Andrefanambohijanahary
Hanatosaka ireo vazo miteny indray Ifanihy
Anisan’ireo sangany. Hanatosaka indray ireo vazo miteny Ifanihy amin’ny seho takariva ataony etsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Nahafantarana ity mpanakanto ity ny fahaizany manolotra tononkira feno hatsikana nefa mitondra fisainana sy ny fanaingoana izany amin’ny feon-gitara. Ankoatra ireo hira taty aoriana toa ny « Avy lavitra », « Ma glita »… dia mbola hanakoako mandritra ny seho ihany koa ireo hira fahiny toa ny « Ikala dauphine », « Ilesabotsy », « Iray bodofotsy »…
Le Glacier – Analakely
Tsinjaka Mangalibe hafanain’i Dadah de Fort-Dauphin
Mpanakanto avy any amin’ny faritra Anôsy. Ela tsy tazana ka hanolotra « Cabaret spécial 2018 » i Dadah de Fort-Dauphin anio alina etsy amin’ny Le Glacier Analakely. Mpanakanto fantatra amin’ny fitrandrahana ny gadona « mangalibe » ity mpanakanto ity, ary mahay manafana seho takariva toa izao, izay matetika mitohy amin’ny fandihizana. Ankoatra ireo hira mihetsika, indrindra ireo amin’ny gadona mangaliba toa ny « Tia resaky », « Tonga de action », « Dahiko anihôky » dia hisongadina eny antsefatsefany eny ireo mozika milamindamina toa ny « Malahelo chérie », « Malalako »…
Nigadona teto Madagasikara, ny alatsinainy 17 jolay teo, ny Mpanjakavavin’i Swaziland, Ntombi Thwala, sy ny zanany lahy, S A Mavela, ary ny delegasiona mafonja ahitana vehivavy maro. Rehefa avy noraisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny ity Renin’i ...Tohiny